Samsung Galaxy na gam akporo 10 adabaghị na Google Daydream | Gam akporosis
Samsung Galaxy na gam akporo 10 adabaghị na Google Daydream
Ụlọ Ignatius | | Noticias, Samsung
Samsung gosipụtara n'ihu ọha ihe ngosi ya na 2015, site n'enyemaka nke Gear VR, iko ndị na-eme ka gburugburu ebe obibi dị adị site na iji ụlọ ọrụ ama ama. N’afọ 2016, ha wepụtara ụdị ọhụrụ. Site ụbọchị ahụ obere ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ anyị mụtara ọzọ.
Google, maka nke ya, banyere n'eziokwu mebere otu afọ mgbe e mesịrị, na-ebido Daydream, ikpo okwu dakọtara na ụdị gam akporo dị elu. Mana dịka ọ dị na Samsung, anyị amụtabeghị ihe ọzọ n'okwu a, opekata mpe ruo taa. Emeputara ohuru nke Samsung Samsung na gam akporo 10 nsogbu ndakọrịta.
Dabere na isi mmalite dị iche iche, Samsung ama ndị emelitere na gam akporo 10 nwere akwa mkpuchi UI 2.0 ma ọ bụ karịa, na-adịkwaghị ekwekọ na Daydream n'elu ikpo okwu nke Google. Tupu ntọhapụ nke mmelite a, smartphones ndị na-adabaghị ugbu a ugbu a, ọ bụrụ na ha dakọtara ma rụọ ọrụ na-enweghị nsogbu na iko Daydream na ikpo okwu. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ ahụ họọrọ ihe ngwọta Google site na Daydream ma akabeghị emelitere, ọ ga-adịrị gị mfe ịtụle ma ọ bara uru ijigide ndakọrịta ma ọ bụ ịchekwa ama gị.
Ọ bụ ezie na ụdị Samsung emelitere na gam akporo 10 na ngwugwu nhazi UI 2.0 adịghịzi adakọ, ụdị Google Pixel nwere otu ụdị gam akporo, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla, yabụ ihe niile yiri ka ọ na-egosi ihe ihe agbajiri na nhazi nke nhazi nke Samsung ya na mmelite kacha ọhụrụ.
Ma ọ gbajiri ma ọ bụ Samsung ha choro ikpofu ihe omuma a obere ihe ịga nke ọma ọ nwere n'etiti ndị ọrụ. Samsung's Gear RV adịbeghị maka ọrịre maka ogologo oge (dị ka Google's Daydream), iko ndị mepụtara na mmekorita ya na Oculus, otu ikpo okwu nke kwụsịrị ịnye ngwa iji jiri iko eziokwu Samsung mebere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy na gam akporo 10 adabaghị na Google Daydream
Sonar Smash bụ oge ịse 'nke onye isi agwa bụ dolphin
Oke Golf na-akpọrọ gị gaa egwuregwu nke 4 ma ọ bụ 8 egwuregwu nwere ike ị ga-eji mee ihe niile